What does Zimbabwean mean?
Definitions for Zimbabwean
Here are all the possible meanings and translations of the word Zimbabwean.
a native or inhabitant of Zimbabwe
of or relating to or characteristic of Zimbabwe or its people
A person from Zimbabwe or of Zimbabwean descent.
Of, from, or pertaining to Zimbabwe, the Zimbabwean people or the Zimbabwean language.
How to pronounce Zimbabwean?
How to say Zimbabwean in sign language?
The numerical value of Zimbabwean in Chaldean Numerology is: 7
The numerical value of Zimbabwean in Pythagorean Numerology is: 6
Examples of Zimbabwean in a Sentence
These women are victims of an escalating crackdown on the right to freedom of expression and criminalization of dissent. Instead of persecuting them, the Zimbabwean authorities should focus their efforts on holding those suspected to be responsible for their horrifying abduction, torture and sexual assault to account.
Governor John Mangudya:
The decommissioning of the Zimbabwean dollar has therefore been pending and long outstanding since 2009, we cannot have two legal currency systems. We need therefore to safeguard the integrity of the multiple-currency system or dollarization in Zimbabwe.
Images & Illustrations of Zimbabwean
Translations for Zimbabwean
Get even more translations for Zimbabwean »
Find a translation for the Zimbabwean definition in other languages:
Discuss these Zimbabwean definitions with the community:
"Zimbabwean." Definitions.net. STANDS4 LLC, 2022. Web. 20 Jan. 2022. <https://www.definitions.net/definition/Zimbabwean>.
Are we missing a good definition for Zimbabwean? Don't keep it to yourself...
Alternative searches for Zimbabwean:
Search for Synonyms for Zimbabwean
Search for Anagrams for Zimbabwean
Quotes containing the term Zimbabwean
Search for Phrases containing the term Zimbabwean
Search for Poems containing the term Zimbabwean
Search for Scripts containing the term Zimbabwean
Search for Abbreviations containing the term Zimbabwean
What rhymes with Zimbabwean?
Search for Song lyrics containing the word Zimbabwean
Search for Zimbabwean on Amazon
Search for Zimbabwean on Google